နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ (17May) – Gunners' Side
ဆာကာကို အာဆင်နယ်မှာသာ ထာဝရနေစေလို
ဆာကာကို အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်တစ်ဦးဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက် အာဆင်နယ်ကစားသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆက်ဂ်ညာက The Mirror နဲ့တွေ့ဆုံစဥ်မှာ အခုလိုပဲ​အကြံဉာဏ်အချို့ပေးခဲ့ပါတယ်။
“ သူကတိုးတက်လာနေပါတယ် .. ဆက်ပြီးလဲတိုးတက်ဦးမှာပါ.. အခြားအသင်းတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုသူဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး … ဒါက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စပါ။ သူလုပ်ချင်တာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အထင်ကတော့ သူဟာ ဒီမှာဆက်ကစားရင်း အာဆင်နယ်သမိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သိပ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေသူ့မှာရှိပါတယ်။ သူမတိုင်ခင်မှာတုန်းက အရည်အချင်းရှိတဲ့လူငယ်အဖြစ် ဝီးရှိုင်းယားကိုပဲ မြင်ခဲ့ရတာပါ “ ဆိုပြီး အသင်းမှာသာ ကစားဖို့ ရည်ညွန်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အယ်နီနီက အာဆင်နယ်ကမ်းလှမ်းတာကို စောင့်နေကြောင်းထုတ်ပြောလာ
အာဆင်နယ်အသင်းက စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက် သတင်းထွက်နေတဲ့ ကွင်းလယ်လူအယ်နီနီကတော့ သူ့ရဲ့ဆန္ဒကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။
“ အရင်ကလည်းပြောပြီးသားပါဗျာ .. အာဆင်နယ်သာလိုချင်ရင် ကျွန်တော်ဒီမှာသေချာပေါက်ဆက်နေမှာပါ …. သူတို့ဖက်က “ မင်းကိုလိုချင်တယ်ကွာ “ လို့ပြောတာကို ကျွန်တော်စောင့်နေတာပါ .. ဒီအသင်းက ကျွန်တော့်ဘဝဖြစ်နေခဲ့ပြီးပါပြီ “ ဆိုပြီး Sky Sports နဲ့အတွေ့မှာ ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေသလို အသင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အာတီတာကိုယုံကြည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းလိုက်နာဖို့အသင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရစ်ချာလီဆန်ကို ခေါ်ယူဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းများသုံးသပ်နေကြ
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ တိုက်စစ်မှုးဂျေးဆူကိုခေါ်ယူမှာဖြစ်ပေမယ့် အန်ကတ်တ်ီယာသာထွက်ခွာသွားရင် ရစ်ချာလီဆန်ကိုလည်းခေါ်ယူမှာဖြစ်ကြောင်း The Hardtackle က သတင်းများစွာကို ကိုးကားပြီးတင်ဆက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသတင်းမတိုင်ခင် ရက်အနဲငယ်တုန်းကလည်း Give Me Sport ရဲ့ သတင်းတင်ဆက်သူ ဒန်ဂျုံးစ်က အဲဗာတန်တိုက်စစ်မှုး ရစ်ချာလီဆန်ဟာ အာဆင်နယ်ကိုပြောင်းလာဖို့အတွက် အခြေအနေအချို့ရှိနေကြောင်းကို သုံးသပ်ထားခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မက္ကဆီကို ကိုရွေးခဲ့တဲ့ ဖလိုရက်စ်
ကနေဒါ ၊ အဂ်လန်နဲ့ မက္ကဆီကိုအသင်းတွေကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိနေတဲ့ အာဆင်နယ်လူငယ်လေးဖလိုရက်စ်ဟာ မက္ကဆီကို နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းအတိအလင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလာပါတယ်။
“ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘဝတလျှောက်လုံးကို မက္ကဆီကိုနိုင်ငံအသင်း အတွက်ကစားသွားမှာပါ “ ဆိုပြီးဖွင့်ဟလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာလူငယ်တွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ ဖလိုရက်စ်ဟာ အသက် ၁၇ နှစ်သာရှိသေးပေမယ့် U23 အသင်းနဲ့အတူ မှတ်တမ်းကောင်းတွေရရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရာသီမှာ ဆာကာ က ရိုနယ်ဒိုထက် ပိုမကောင်းဘူးလို့ ဖာဒီနန်ပြော
မန်ယူဂန္တဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖာဒီနန်က ရိုနယ်ဒိုကိုကျော်လွန်ပြီး အာဆင်နယ်လူငယ်လေး ဆာကာတစ်ယောက် အကောင်းဆုံးဆုအတွက်လျာထားခံရတဲ့အပေါ်မှာ မနှစ်သက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလာပါတယ်။
“ ဆာကာက အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်လျာထားခံရတယ် တဲ့လား …? ကျွန်တော်ကတော့ သူအဲ့လောက်ကောင်းတယ်လို့ မမြင်မိသေးပါဘူး .. ဒီရာသီမှာ ဆာကာက ရိုနယ်ဒိုထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ မထင်ပါဘူး “ လို့ သူ့ရဲ့ Youtube Channel မှတဆင့်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။